को हुन् प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा ? सङ्गठनमा यस्तो छ उनको योगदान
शुक्रबार , २३ श्रावण २०७७
मंगलबार असार २३, २०७७/ Tuesday 07-07-20
काठमाडौँ - मुलुकको २८औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) मा शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा गरिएको छ । बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यही बुधबार रातिदेखि हालका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे अनिवार्य अवकाश लिने भएकाले आज मन्त्रिपरिषद्ले थापालाई आइजीमा बढुवा गरेको हो । हाल उहाँ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग विभागमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
भक्तपुरको कटुञ्जे ९हालको सूर्यविनायक नगरपालिका० मा जन्मनुभएका थापा अब्बल प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ । विसं २०४९ मा प्रहरी निरीक्षक भएदेखि नै उहाँ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुँदै आउनुभएको थियो । अहिले महानिरीक्षकका लागि पनि थापा पहिलो नम्बरमै हुनुहुन्थ्यो । विसं २०७५ असोजमा डिआइजी हुनुभएका थापा गत साल चैत ९ गते एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो ।
उहाँसँगै अर्का एआइजी हरिबहादुर पाल पनि प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । एआइजी तारिणीप्रसाद लम्साल भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीसँगै बुधबार रातिदेखि अनिवार्य अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ ।
गत माघ २८ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनुभएका ज्ञवाली पाँच महिना मात्रै आइजिपीको कार्यकाल छ । उहाँको कार्यकालको अधिकांश समय कोभिड–१९ सङ्क्रमणमा रुमल्लिन पुग्यो ।
इमान्दार र कुशल सङ्गठनको रुपमा चिनिनुभएका उहाँको कार्यकाल पनि विवादरहित नै रह्यो । कोभिड–१९ का कारण खास उल्लेखनीय नयाँ काम गर्न पाउनुभएन ।
थापाको कार्यकाल भने आगामी विसं २०७९ साल वैशाखसम्म रहनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले बुधबार साँझ प्रहरीको स्वागत र बिदाइको कार्यक्रम राखिएको जानकराी दिनुभयो ।
थापाको सङ्गठनमा यस्तो छ योगदान - विसं २०४९ वैशाख १९ मा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका थापा राजधानीबाहिर सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, धादिङ, झापा, कास्कीमा बसेर सेवा दिनुभएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुँदा थापाले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको समेत नेतृत्व लिनुभएको थियो । त्यसअघि लामो समयमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर काम गर्नुभयो । तीनवटा युएन मिशनमा समेत सहभागी थापा कुशल सङ्गठकका रुपमा चिनिनुहुन्छ ।
प्रहरी समूहका ९८औँ व्याजमा उहाँसँगै हालका एआइजी पाल पनि प्रवेश गर्नुभएको थियो । थापासँगै प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँका सहकर्मीहरु केही डिआइजी त भने केही एसएसपी नै हुनुहुन्छ । नवनियुक्त आइजी थापा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा अब्बल मानिनुहुन्छ । पाल भने कमान्ड नियन्त्रणमा पोख्त हुनुहुन्छ ।
प्रहरी निरीक्षक हुँदा प्रतिष्ठानसँगै सल्यान र सिन्धुपाल्चोकमा खटिनुभएको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदा धादिङ जिल्लाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक भएपछि उहाँले झापा र कास्की प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० हुँदा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तासमेत हुनुभयो । उहाँ एआइजी भएपछि भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागको प्रमुख हुनुभयो ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजीबाट एकैचोटि बढुवा भएर महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो । उहाँको नियुक्तिमा भने सरकारले प्रशंसा पाएको थियो । प्रहरी सङ्गठनमा हालका थापाको नियुक्तिलाई पनि स्वच्छ निर्णयका रुपमा हेरिएको छ ।
ज्ञवालीअघिका प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालतमा समेत पुगेको थियो । कनिष्ठलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै कतिपय प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । यसपटक निर्विकल्प रुपमा उहाँको नाम गएको एक प्रहरी अधिकृतले बताउनुभएको छ ।
चार वर्षअघि जयबहादुर चन्द आइजी हुँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल अदालत पुग्नुभएको थियो । उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजी हुँदा पनि प्रहरीमा विवाद बल्झिएको थियो । सर्वेन्द्र खनाल डिआइजीबाट बढुवा हुँदा तत्कालीन डिआइजी रमेश खरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा ज्येष्ठता, कुशल नेतृत्वकर्ता, कार्यक्षमता, प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने क्षमता लगायतका आधारमा आइजी हुने आधार छ ।रासस
व्यापारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि न्यूरोड सिल
कांग्रेस र नेपाल चिकित्सक संघको निष्कर्ष, कोरोना रोकथामको पूर्वतयारीमा सरकार चुक्यो
विराटनगरमा कोरोनाको जस्तो लक्षण देखिएका एक पुरुषको मृत्यु
बुद्ध एयरले भदौ १ गतेदेखि उडान भर्दै, तोक्यो नयाँ भाडादर (सूचीसहित)
कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने– रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा उठ्छन् र ?
चलचित्रमा साथ देखिदै साम्राज्ञी र आना
कोरोना रिपोर्टको पर्खाइमा अनमोल केसी, उपासनाको रिपोर्ट आज आउदै
कोरोना मुक्त भएकाहरु मध्ये ९० प्रतिशत व्यक्तिको फोक्सो खराब : अध्ययन
चीनमा फैलिएको नयाँ भाइरस के हो ?
विष्णु रिमालको नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चेतावनी, नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस्
यस्ता रोग भएकाहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् दही, नत्र ...
भ्रष्टाचारविरोधी भनेर चिनिने उपसचिव सञ्जेलमाथि कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त
अनौठा मानिस, जसका शरिरमा छन् रुखका हाँगा, गरियो २५ पटक अपरेसन
कुखुराको भालेले लियो एक महिलाको ज्यान
गलेका प्रचण्ड बालुवाटार पुगे
केपी ओली र इमरान खानका कारण नरेन्द्र मोदीलाई छिमेकमा मुख देखाउन गाह्रो
ग्यास्ट्रिक, क्यान्सर लगायत यति धेरै रोगका लागि उपयोगी सुकमेल, यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा